Kitra – «Ligue des champions d’Europe» : nandresy avokoa ny Real sy ny Bayern de Munich | NewsMada
Kitra – «Ligue des champions d’Europe» : nandresy avokoa ny Real sy ny Bayern de Munich
Voahaja ny lojika raha teo amin’ny vokatra ho an’ireo lalao ampahavalon-dalana mandroso roa, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “Ligue des champions”, natao ny alarobia lasa teo. Samy nivoaka ho mpandresy avokoa mantsy ireo ekipa heverina fa lehibe ary samy nanamontsana tamin’ny isa mavesatra avokoa. Anisan’izany ny Real de Madrid izay nandavo ny Naples, tamin’ny isa mazava 3 no ho 1. Na io aza ny isa nisarahan’ny roa tonta, tsy nahatafiditra baolina i Cristiano Ronaldo. Nisongadina kosa ilay Frantsay Benzema, nahafaty ny baolina voalohany ho azy ireo, teo amin’ny minitra faha-18.
Ankoatra izay, nomontsanin’ny Bayern de Munich, tamin’ny isa mazava, 5 no ho 1, ny Arsenal. Anisan’ny nahatafiditra baolina ihany koa, tamin’ity, i Robben. Taorian’ity fandresena ity, voakiana mafy i Arsene Wenger, mpanazatra ny Arsenal, ary mety hiafara hatramin’ny fandroahana azy izany.
Raha ireo vokatra ireo, efa mazavazava ny lalan’ny Bayern sy ny Real, hiakarana any amin’ny dingan’ny ampahefa-dalana. Mety tsy hampitsimbadika ny isa mantsy ireo mpifanandrina amin’izy ireo, amin’ny lalao miverina.